Friday, 15 Jan, 2021 2:23 PM
दुई छिमेकी देशको कूटनीतिमा एउटा मान्यता रहेको छ, ‘तपाईंले सबै कुरा बदल्न सक्नुहुन्छ तर छिमेकीलाई बदल्न सक्नुहुन्न । र, जुन छिमेकीलाई बदल्न सकिँदैन, उसका बारेमा जान्नु र आफ्नो बुझाइ बढाउनुु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।’ नेपाल भारतको एक छिमेकी देश हो । सामान्यतया यो मानिन्छ कि नेपाल भारतको घनिष्ठ मित्र हो, र यो सत्य हो । दुवै देशको यो मित्रता हजारौँ वर्ष पुरानो हो, जसको केन्द्रमा हाम्रो संस्कृति पनि हो र हाम्रो धर्म पनि । तर, पछिल्लो केही समययता जुन नयाँ–नयाँ विवाद उठेका छन्, त्यस्ता विवाद पछिल्ला ७० वर्षमा कहिल्यै उठेका थिएनन् । नेपालले पहिला भारतको नक्सामाथि आपत्ति जनायो, पछि आफ्नो नक्सा जारी ग¥यो । त्यसपछि श्रीरामको जन्मस्थान र महात्मा बुद्धलाई लिएर यस्ता दाबीहरू ग¥यो, जसबाट नयाँ विवादहरूको सुुरुवात हुुँदै गयो । हालका दिनहरूमा जति पनि विवादित बयान आइरहेका छन्, यिनै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतको जी न्युजका प्रधानसम्पादक सुधीर चौधरीले लिनुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।
हेर्नुस्, तपाईंको प्रश्नले पनि बताउँछ कि इन्डिया राम र हामी लक्ष्मण, यसका धेरै अर्थ निस्किन्छन् । म भन्छुु– भूगोलमा, जनसङ्ख्यामा ठूूलो र सानो हुन सक्छ । तर, हामी सधैँदेखि सार्वभौम, समानताको कुुरा गर्छाैं । अर्थात् हामी सानो र ठूूलो छैनौँ । साइजमा ठूूलो सानो हुुन सक्छौँ तर राष्ट्रका रूपमा, एउटा देशका रूपमा सानो ठूलोको भावना यदि राख्छौँ, तबमात्र बहस हुन्छ । यो ‘सेन्टिमेन्ट’मा अवश्य नै केही समस्या छ । र, हामी चाहन्छौँ कि हामी दुई देश सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश, दुई छिमेकी मित्र देश, जो एक क्षेत्रमा अवस्थित छौँ । हाम्रा सम्बन्धलाई त्यसैअनुुरूप बुुझ्नुुपर्छ । यो पुरानो जमाना होइन । यो कोलोनियन एरा (उपनिवेशवादी युग) होइन । यो स्वाधीनताको एरा हो । पारस्परिक सम्मानको एरा हो ।
दुुवै हाम्रा छिमेकी हुन् । र, छिमेकीलाई बदल्न सकिँदैन । आकारमा, जनसङ्ख्यामा, विकासमा अगाडि छन्, दुुवै । हाम्रा लागि यो खुसीको कुुरा हो । हामीले यदि उत्पादन गर्न सक्यौँ भने यी हाम्रा बजारहरू हुन् । र, यदि उत्पादन गर्न सकेनौँ भने तिनको उत्पादन हामीले भोग गर्नुुपर्छ । हाम्रो बीचमा जुन व्यापारिक असमानता, उत्पादजन्य जो असमानता छ, असन्तुलन छ, तिनलाई हामी हटाउन चाहन्छौँ । दुई फरक–फरक राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक र सामाजिक प्रणाली पनि, यसमा पनि केही भिन्नता छन् । यस्ता छिमेकीको बीचमा हामी छौँ । र, दुवै छिमेकीसँग हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहेका छौँँ । एउटा कार्ड अर्कोसँग खेल्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यस्तो हामीले गर्दैनौँ । यदि खेल्यौँ भने त्यसले कसैलाई पनि फाइदा पु¥याउँदैन । कार्ड खेल्ने र छक्काउने काम गर्नुहुँदैन । हामी यो शैली अपनाउँदैनौँ ।
तपाईंको कुरा अलि भड्काउनेखालको छ । अन्यथा नमान्नुहोला । गलवानसँग हाम्रो लिनु–दिनु केही छैन । तपाईंलाई म यो सम्झाउन चाहन्छु कि दिल्लीले आफ्नो आठौँ संस्करणको नक्सा प्रकाशित ग¥यो । कस्मिर र लद्दाखको कुरा थियो, त्यहीँ सीमित हुनुपर्ने थियो । त्यसमा नेपालको टेरिटोरी सामेल गर्नुपर्ने कुनै जरुरत थिएन । हामीले त्यो नक्साको विरुद्धमा कूटनीतिक नोट पठायौँ । वार्ताको प्रस्ताव राख्यौँ । र भन्यौँ– वार्ताको माध्यमबाट यो असमझदारीको समाधान गर्नुुपर्छ । तपाईंले प्रकाशित गर्नुभएको आठौँ संस्करणको नक्सा ठीक भएन भन्यौँ । त्यसको कुनै ‘पोजिटिभ रेस्पोन्स’ भएन । अब गलवानसँग हाम्रो के लिनु–दिनु छ र ? तपाईंले नक्सा नै प्रकाशित गर्नुभयो त्यही बेला, र हामीले लेख्नुप¥यो कि यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर ।
फेरि बाटो बनाइयो हाम्रै टेरिटोरीमा र उद्घाटन गरियो । हामीले फेरि कूटनीतिक नोट लेख्यौँ, संवाद गर्न आग्रह ग¥यौँ । यो ठीक भएन भन्यौँ । यसमा गलवानसँग के लिनु–दिनु भयो र ? त्यही समयमा उद्घाटन किन गर्नुपरेको थियो र ? अब बताउनुुस्, गलवानसँग हामीलाई कसरी जोड्न मिल्छ ?
अर्को, दोस्रो देशको पोलिटिक्स (राजनीति) कसैको साइड (पक्ष) लिने राजनीति हाम्रो होइन । हाम्रो पोलिटिक्स हो, पोलिटिक्स अफ न्युट्रलिटी (तटस्थता) । हामी दुुवै छिमेकीहरूको मामिलामा तटस्थ रहन्छौँ । वार्ता भइरहेको छैन भने हामी वार्ता सुरु गराउने कोसिस गर्छौं । दुवै मित्र छन् । हामी प्रेसिडेन्ट सी (चिन फिङ) सँग पनि कुरा गर्न सक्छौँ, ली खस्याङसँग पनि कुरा गर्न सक्छौँ, प्राइम मिनिस्टर मोदीजीसँग पनि पनि कुरा गर्न सक्छौँ । हामीले दुवै मित्रको बीचमा जो असमझदारी छ, त्यसलाई हटाउन चाहन्छौँ । सबभन्दा ठूलो तागत के हो ? मित्रता ।
हामी दुवैतिर वार्तामा बस्नका लागि कुरा राख्न सक्छौँ । उहाँहरू लगभग समवयस्क साथीहरू हुनुहुन्छ । एक/डेढ वर्ष कोही जेठो, कोही कान्छो होला । तर, समवयस्क छौँ । लामो समयदेखि राजनीतिमा छौँ हामी । त्यसैले हामी साथीजस्तो मात्रै होइन, साथी नै हौँ ।
तपाईंको प्रश्न साह्रै राम्रो छ । मलाई आशा छ, हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउँछ । साह्रै नै कमजोर स्थिति भयो भने पनि प्रमुख पार्टी हामी नै हुनेछौँ र चुनावपछि पनि सरकारको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्ला सायद । त्यसकारण म आश्वस्त गर्न चाहन्छु सबै साथीहरूलाई कि नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउनका लागि हामीले अझ बढी योगदान गर्न सक्छौँ ।
गलत इम्प्रेसन हो यो । यस्तो कुनै एभिडेन्स (उदाहरण) छैन, हुनै सक्दैन । किनकि हामीले दुई छिमेकी देशसँग सौहार्द, समस्यारहित सम्बन्ध चाहन्छौँ । म एउटा कुुरा भन्छु– तर यसमा आधीचाहिँ हटाइदिन्छु, हात्ती जब लड्छन्, मैदानको नोक्सान हुुन्छ र हात्ती मिले पनि मैदानको नोक्सान हुन्छ । यसबाट हामीले नोक्सानको कुरालाई हटाइदिऊँ । यी ठूूला छिमेकी लड्न थाले भने हामीलाई नोक्सान त हुन्छ । त्यसकारण हामी चाहन्छौँ कि अब एसियाको जमाना हो, आफ्नो स्वयम्को विकास गर्नुुपर्छ । हिजोको विकास थियो– अर्काको स्रोत लुटेर लैजाने । अर्काको स्रोत, जनशक्ति, सम्पत्ति लुटेर धन कमाउनुु । यो थियो हिजोको विकासको मोडेल । आजको विकासको मोडेल हो– स्वयम्को विकास गर्नु । र, यसो गर्नका लागि शान्ति चाहिन्छ, मित्रता चाहिन्छ, तनावरहित वातावरण चाहिन्छ । अशान्ति हाम्रो विकासमा बाधक बन्न जान्छ । तसर्थ, हाम्रा छिमेकीबीच राम्रो सम्बन्ध होस्, विश्वासको वातावरण होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । सन्देहरहित मित्रता होस् किनभने सन्देहपूर्ण मित्र छेउमा छ भने निद्रा लाग्दैन । सधैँ यो शङ्का बनिरहन्छ कि म सुतेपछि सँगै छेउमा रहेका, सुतेको स्वाङ रचिरहेका अविश्वसनीय मित्रले कुन्नि के गर्देला !
हेर्नुुस्, म नेपालका बारेमा मात्रै बोलिरहेको छैन । जब म हाम्रो सभ्यताका बारेमा, इतिहासका बारेमा कुुरा गर्छु, हाम्रा पूर्वज, ऋषिहरू, सन्तहरूको कुुरा गर्छु, त्यतिबेला मैले हिमवत्खण्डको कुरा गरिरहेको हुन्छु । हिमवत्खण्ड संसारको यस्तो ठाउँ हो, यो प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यमात्रै होइन, यो खनिजहरूको खानी पनि हो । यहाँको हावापानी यस्तो हो कि यहाँका मान्छेहरू ऋषि–महर्षि, विद्वान् बनिहाल्छन् । केही अगाडि पनि मैले भनेको थिएँ कि हामीकहाँ तीन हजार वर्षपूर्व शल्यक्रिया चिकित्साशास्त्रको विकास भएको थियो । यसको प्रमाण अहिले पनि हामीले चरकसंहितामा हेर्न सक्छौँ । हामीले शल्यक्रियाको विकास सुश्रुतसंहितामा हेर्न सक्छौँ ।
तपाईंले जे सोध्नुुभयो, ती सब कुुराहरूमा हामी अल्झिनुहुँदैन । यो अल्झिने कुरा हो । वृहत् दृष्टिकोण लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । कहाँ प्वाल छ, त्यो हामीले देख्नुहुँदैन । प्वालमा औँला छिराइ–छिराइ त्यसलाई झन् ठूलो पार्नुहुँदैन । तसर्थ, म भारतीय भाइबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामीले कुुनै प्रकारको असमझदारी राख्नुुपर्ने आवश्यकता छैन । हामी दुई छिमेकी देश छौँ । आकारमा सानो ठूलो छौँ तर राष्ट्रको हैसियतले बराबर छौँ । र, यसै समताको भावनाले अगाडि बढ्दै जानुुपर्छ ।
यदि चीनले तपार्इंसँग यस्तो गरेको भए के तपाई चीनसँग पनि त्यही गर्नुहुन्थ्यो त ?